Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyad Cusub oo Maanta Lagu Yagleelay Wadanka Malta.
Jaaliyad Cusub oo Maanta Lagu Yagleelay Wadanka Malta.
Maanta ooy taariikhdu tahay 19/4/2014, waxaa Jaziirada Malta oo katirsan qaarada Yurub kadhacay shir aad u balaadhan oo si heersare ah loosoo agaasimay kasoo looga gollahaa Jaaliyad cusub oo laga Yagleelay Jaziirada Malta. Wadanak Malta oo ah Jaziirad aad uyar ayaa waxaa intii mudo ahba kusoo badanayay shacabwayne tiro badan oo kasoo jeeda Ogadenya.
Furitaankii shirka kabacdi waxaa warbixin kooban so jeediyay Mudane Cabdirisaaq Aadan Maxamad taasoo kusaabsanayd Jaaliyada Cusub ee wadanka Malta laga yagleelay kabacdi waxaa cod baahiyaha sidiiran loogusoo dhaweeyay Mudane Xasan Macalin, oo ah Gudoomiye Kuxugeenka Hogaanka Abaabulka iyo Arimaha Ururka (HAAU).
Mudane Xasan wuxuu madasha kulankan kasoojeediyay warbixin balaadhan oo dhinacyo badan taabanaysa. Warbixintaasoo xanbaarsanayd xaalada guud ee Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenya (JWXO), taasoo ay hurmuudka katahay halganka kasocda gudaha iyo dibada Ogadenya. waxaa kaloo mudane xassan uu sifaah faahsan oo waafi ah ooga warbixiyay xaalada gumaysiga Itoobiya uu maanta kusuganyahay.
Waxaa sidoo kale kulanka kaga qaybqaatay khadka isgaadhsiinta Mudane Cabdullahi Ciraaqi oo ah Isku Duwaha Bariga-Dhexe. Wuxuu halgamuhu lawadaagay dad waynihii madasha fadhiyay warbixino kusaabsan gudaha Ogadenya isla markaana wuxuu hambalyo iyo bogaadin usoo jeediyay Jaaliyada Ogadeenia ee maanta lagaga dhawaaqay wadanka Malta. Dhanka kale waxaa talooyin iyo fikrado dhaxal gal kasoo jeediyay madasha shirka qaar kamid ah kaqaybgale yaashii joobta joogay. Waxay aad ooga hadleen baahida looqabo in siwadajir ah looga hortago xeeladaha Gumaysiga Itoobiya ee saamo laluudka ah. Xubnihii madasha kulanka kahadlay yaa kunuuxnuuxsaday baahida looqabo in guud ahaan shacabka Somalida Ogadenya iska kaashadaan Gumaysiga Wayaanaha ee hagardaamada joogtada ah kuhaya shacabka S.Ogadenya.
Gabagabadii iyo gunaanadkii shirkan ayaa lamagacaabay gudi 7-xubnood ka kooban oo hogaanmin doono Jaaliyada cusub haduu ilaahay yiraahdo labada sano ee soosocota. Jaaliyada Malta ayaa kusoo biirtay Jaaliyaadka Somalida Ogadenya ee kahawlgala dunida dacaladeeda. Waxayn noqon doontaa Jaaliyadii oogu danbaysay taasoo daliil u ah sida halganka Ogadenya uu ugaamuray. Shirkan ayaa kusoo gababoobay guul iyo is afgarad taasoo ay gudigii cusbaa kula wareegeen masuuliyada maamulka Jaaliyada iyagoo balanqaaday inay halganka gumaysiga Itoobiya lagula jiro ay garab istaagi doonaan sihagar la,aan ahna waajibaadkooda ugudan doonaan Haduu eebuhu yiraahdo.
ONA / Malta